Somalia u tartantay Hogaanka CECAF Itobiya oo garab istaagtay Somalia iyo Kenya oo ka soo horjeedsatay.. |
Somalia u tartantay Hogaanka CECAF Itobiya oo garab istaagtay Somalia iyo Kenya oo ka soo horjeedsatay..
November 28, 2013 – Written by admin – Edited byadmin
Mr. Cabdi Qani Saciid Carab oo sidoo kalana xubin ka ah guddiga FIFA isla markaana ah xoghayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubada Cagta ayaa helay codadka 9 wadan oo ka mid ahaa 12 dal oo codadkooda ka dhiibtay doorashada oo dhacday xili dambe Talaadadii.
“Aad ayaan ugu mahad celinayaa dhamaan wadamada xubnahaka ah CECAFA, kuwii i doortay iyo kuwii aan idooran intaba, dhamaantood waa mahadsanyihiin, sababtoo ah kubada cagtu waa walaalnimo iyo saaxiibtinimo, sida ay na barayaan qawaaniinta kubada cagta aduunka”ayuu doorashadiisa kaddib saxaafada u sheegay Mr. Cabdi Qani Saciid Carab.
Wadamada Sida aadka ah ugu ololeeyay Soomaaliya mudada dheerna is xulafeysigu uu kala dhexeeyay Soomaaliya ayaa waxaa hormuud ka ahaa: Itoobiya, Jabuuti oo aanu walaalo nahay, Rwanda, Sudan, Burundi iyo Uganda.
Xubnaha CECAFA ee la doortay ayaa xafiiska maamulka sii heyn doona labada sanadood ee inasoo aadan, waxaana madaxda sar sare ee cecafa ka mida:
Leodegar Tenga (Tanzania) Guddoomiye, Lawrence Mulindwa (Uganda), Ku xigeen.
Xubnaha: Tareq Atta (Sudan) Abdi Qani Said Arab (Somalia), Raol Gisanura (Rwanda) iyo xoghayaha guud Nicholas Musonye (Kenya) oo isaga aan la dooran laakin doorashada kaddib la magacaabo.
Xubnaha kale ee Soomaaliya ugu jira ururka Kubada cagta Bariga iyo bartamaha Afrika ee CECAFA waxaa ka mida Madaxa maaliyada CECAFA Caamir Cabdi Xasan, Agaasimaha warfaafinta xiriirka Soomaaliyeed shaafici Muxuyadiin (Islow) oo xubinka ah Guddiga warfaafinta CECAFA, iyo Xasan maxamed Maxamuud oo isna xubin ka ah guddiga garsoorka CECAFA.
Guddoomiyaha xiriirka Kubada Cagta Soomaaliya Cali Siciid Guuleed Rooble ayaa isna xubinka ah guddiga horumarinta xiriirka kubada cagta qaarada Afrika ee CAF. Arrintan ayaa muujineysa sida Soomaaliya oo muddo dheer aan dowlad lahayhn ay uga dhex muuqatay maamullada kubada cagta caalamiga ah